[Ankapobeny ] 26 Septambra, 2009 14:24
Tenenina foana fa eeeee!
Afabaraka ny filohan'ny tetezamita tany NY t@ fivoriana ara-potoana ny firenena mikambana. Indroa saika hisisika hitena mantsy ranamana kanjo sendra ny taolana tsy nahendry azy!!! na dia adala ary izy @ fijeriko. Efa fantatra fa misy ny romoromo momba ny nakana ny toerana mbola mitonatonana any @ ihany. Ilay SADC namavony taloha tokoa mantsy no namelaka tamaina azy havia sy havanana satria dia tena nalain'ireo baraka imaso imaso mihitsy oe hivoaka izahay raha miteny eo le io fa mpanongam-panjakana io.
Ny vahoaka tsy mandady arona indray no nanalana vokona androany satria dia nodarofana baomba indray ireo vahoaka efa leo azy @ ilay toetra FOZA ORANA.
[Ankapobeny ] 07 Septambra, 2009 14:58
[Ankapobeny ] 02 Septambra, 2009 11:42
Mamely ny gripa
Tsy tazanatazana mihitsy aho tao ho ao izay fa tena repotra be mihitsy tsy tany maputo akory ka! Sahirana t@ papozy kely satria dia nanavy be ny sobiniaina ka voatery naiditra hopitaly!!! Hisaorana an'Andriamanitra aloha fa efa salama indray izy ankehitriny na dia voatery nasina serum 6 tavoangy aza. Mafy ny nanjo ontsa ny fo nahita ity tanana kely napidirana fanjaitra kanefa dia vonjy aina no natao koa dia nionona ny fo nankinina t@ Andriamanitra tokoa ny fitsaboana koa dia sitrana soa amatsara izy ankehitriny.
Tsy gripa H1N1 akory no nahazo azy fa gripa tsotra ihany fa somary mahery vaika kokoa ilay gripa @ izao fotoana izao ny lehibe moa afaka mitaraina marary rehefa misy ny manjo fa ny ankizy tena tsy misy hafatarana azy mihitsy oe tsy salama raha tsy izy efa nisy hafanana be. Sambany rahateo izahay mivady vao mba sendra zaza marary izany ka tsy hitanay izay ho raisina ka ny nikorapaka namojy hopitaly no masaka tao an-tsaina. Kay tena fepetra tsara no noraisinay satria dia nahavonjy tokoa.
Tsy maharam-baovao intsony aloha za tato ato izay fa mijerijery @ aterineto fotsiny tsy misy fotoana hamakiana loha @ fitiavan-tena dry zala koa a ny tena marina. Toa oe rava maina ny tany maputo no henoko farany dia midongy toerana i Rajoelina oe!!! Avelako kely aloha ianareo fa andeha hikarakara ankohonana aho aloa.